WOWOW Wepamusoro Rated Yakakwira Arc Imwe Handle Bhurashi Nickel Kicheni Faucets ine Dhonza Pasi Sprayer SUS 304 Stainless Simbi
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Pasi Makapu Makapu / WOWOW Wepamusoro Rated Yakakwira Arc Imwe Handle Bhurashi Nickel Kicheni Faucets ine Dhonza Pasi Sprayer SUS 304 Stainless Simbi
Rated 4.98 Kunze kwe5 yakavakirwa 41 kasitoma ratings
Iyi tepi yekicheni ine dhonza pasi sprayer inogadzirwa neyakanaka mhangura kukanda uye lead lead kuwacha. SUS304 inochengetedza zvakatipoteredza uye ine hutano, uye hutano hwedu hunoenderana nemuchengeti wedu. Inogona kugadziriswa nekupisa uye kutonhora kutenderera, nyore kutsiva, nyore kuisa, yakasarudzika uye yakashongedzwa, uye inokodzera akasiyana siyana yekugezera uye yekicheni kushongedza
Dhonza pasi pekicheni sofa faucets 2310301
Kusarudza kicheni ski yekuchengetera, imwe yezvakakosha zvinhu hutano hwako nekuchengetedzwa kwenzvimbo. Kicheni sofa faizets iyo isina kugadzirwa uye yakasimba mhando zvigadzirwa, inogona kukanganisa hutano hwako nekuda kwehuputi hwasara hwakasangana nemvura yako yekunwa. Iyo yekudonhedza pasi kicheni sink faucets yeWOWOW inogadzirwa ne bramm nickel uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Mukusanganiswa nezvinhu zvisina tsvina, izvi zvinodzikisa kicheni sofa faizets inokupa iwe wakanyanya kukosha yemari maererano nemhando, kusimba uye kuramba. Iyo yepamusoro yepamusoro ceramic disc vheti yeiyi kudhira kicheni sofa faipits inogona kugara inosvika mazana mashanu ezviuru emvura macircuit zvachose isina kudonha. Izvi zvinopfuura chero indasitiri zviyero. Kupfuura zvese, dhonza fairits yekicheni yeWOWOW chengetedza mvura nekuda kwemusoro wayo mutsva wekutsvaira. Chaizvoizvo iwe unozoona izvi padhiri yako yemvura!
Kunze kwehutano, mashandiro eizvi dhonza kicheni sofa faizets akasiyana siyana zvakare. Iyo yakawanda-functionalsprayer inogona kushandiswa munzira mbiri: rwizi rwakaoma paunenge uchizadza pani nemvura semuenzaniso, uye yakaoma firita yekuchenesa ndiro semuenzaniso. Iyo imwechete inobata mukicheni faucet inoita kuti zvive nyore kugadzirisa huwandu uye kupisa kwemvura. Kune rimwe divi, swivel spout inogona kushandura madigiri mazana matatu ekunyaradza kwakanyanya. Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, iyo yega-lever kunyura faucet inoratidzira dhiri rekudonha re 360 m kukupa iwe yakakura yekugezesa nzvimbo ye1.5 cm. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uine kukitchen yechipiri kunyura, asiwo nekomichi imwe chete yekunyura idzi dhizaini yekicheni sofa faipits yeWOWOW inogona kubatsira. Hakuna nzvimbo imwechete mukati kana kutenderedza kicheni yako kunyura haigone kusvikwa neiyi yekudonha-pasi kicheni sofa faipits yeWOWOW.
Stylish dhiraini-pasi kicheni sofa faipits
Kunze kwehutano uye hutano, hongu, iwe unoda dhizaini dhonza-pasi kicheni sofa fa faipits zvakare. Ikicheni sofa faiki inofanirwa kuumba imwe yakabatana pamwe neyakagadzirwa kicheni yako yose. Vamwe vanhu vanorerutsa mashandisiro emakomendi epamhepo. Kana mumwe munhu apinda mukicheni, hanya yake inobva yangoikwezvwa nemakitchen ekicheni. Kunyangwe madhishi ekicheni ari mashoma, ane simba rakakura pakubata kwese kwekicheni yako. Nekuda kweizvozvo ndezvekukosha kukuru kuti iwe usarudze kicheni yako sipo zvine hungwaru, sezvo inogona kupa kicheni yako kukwidziridzwa kukuru. Aya akaiswa britick nickel dhiza dhizaini yekunyura sofa faizets yeWOWOW ichakupa iyi kukwidziridza pasina kupokana.
Dhonza pasi pekicheni sofa faizets inopa mukana wakanaka pamusoro pemamwe marudzi ekicheni sofa faiki. Nekuda kweiyo mvura inodzoreredzwa yemvura, unogona kuwedzera mukicheni kanyasi kepepuru rako nyore. Neichi chinhu chiri nyore, iwe unogona kusvika chero nzvimbo mukati kana padyo nekicheni siny yako. Uye zvakadaro, iyo hose inosanganiswa nehungwaru mukisiki yako yekugezesa faucet, saka hauzowona chero mvura hoses kana usiri kushandisa yako yekuchera yekicheni sofa faucet. Icho chete mamiriro ndeyekuve neyemhando yepamusoro-soro yekudzora maitiro. Zvinogona kuve kusazvidzora zvakakwana kuti ubvise pasi kicheni sofa faipits iyo iyo mvura hose isingadzore sezvainofanirwa. Inofanirwa kushanda 100% zvakanaka kuti ikupe nyaradzo yakakwana.
Simudza kicheni yako neaya dhonza kicheni sofa faiki
Iko kudhonza pasi mbichana mbichana mapombi eWOWOW zvinoita kuti hupenyu hwako huve nyore. Iyo yegiravhiti yegiravhiti bhora dhizaini yemakombi ekunyura emukicheni anoita kuti ive yakanyatsotsetseka kuburitsa nekudzosera pombi yemvura. Giravhiti bhora inodzosera isprayer otomatiki, saka haufanire kuzviedza pachako kana wapedza kugeza singi yako yekubikira Saka nekudaro-yekudonha-pasi kicheni pombi dzeWOWOW ingangove yekuvandudza kwese kukicheni yako, maererano nezvose zviri zviviri. chimiro uye mashandiro. Sezvambotaurwa, iyo yekudonha-pasi kicheni svombu dzemvura dzeWOWOW dzinopa maviri emvura mashandiro: rwizi uye pfapfaidzo. Aya mabasa maviri anotendera iwe nyore uye ergonomically chinja kubva pfapfaidzo kuyerera kana zvinopesana. Iwe unogona kuita izvi nekureruka kwemunwe kufamba usingatombomisa mvura kutanga. Bhatani rinomhanya zvakanaka uye rinopa kunyaradzwa kwakanyanya.
Nenzira yakakosha mutengo kudhira pasi kicheni kiyi faipits
Unhu hunouya nemutengo, asi kwete kuWOWOW. WOWOW yakawana kukupa iwe wepamusoro-soro yekicheni sofa faipits iyo ichiri kudhura. Nekuda kwekutenga kwayo kwakanaka kwezvinhu uye yakanyanya-otomatiki kugadzira uye yekuedza nzira, WOWOW inokwanisa kukupa iwe dhonza pasi pekicheni sofa feki dzinogona kukwikwidza neye-A-brand kicheni kisink faipits, uye zvakadaro pane chidimbu chemitengo iyoyo. Naizvozvo tine chivimbo chekutaura kuti iwe haungazowana chero yekudonhedza pasi kicheni sink faikits pamitengo iri nani pane WOWOW. Nekuda kweizvozvo, WOWOW inokupa iwe yakanyanya mutengo wemanani iwe wauchawana mumusika.
Kwete pasina chinhu WOWOW inopa 90-zuva rekudzoserwa mari kudzoreredzwa pane yayo dhishi kukicheni sofa faipits. Kana iwe uchifunga kuti yedu yekudonhedza mukicheni sofa faipits haisi iyo yawaitarisira nezvayo, isu tichakupa mari iwe pasina kunetseka kana mibvunzo yakabvunzwa. Zvakareruka saizvozvo. Isu tinomirira zvigadzirwa zvedu uye tinogutsikana kuti tinopa kumusoro-notch kudhira pasi kicheni sofa faipits. Naizvozvo tinoziva kuti haunganyadziswi uye iwe unoshamiswa kwazvo neikova yako itsva yekunyoresa kicheni. Tine vatengi vazhinji vanodzoka kubva kupasi rese, uye tine chokwadi chekuti muchatisarudzawo nguva inotevera zvakare.
Kuisa nyore kwakavimbiswa
Iyo yekudonsa pasi kicheni sink faikits yeWOWOW iri nyore kuisa nekuda kweiyo nyore interface. Unogona kuisa faucet iyi padanho rimwe chete. Naizvozvo unogona kuisa dhizaini yekubheka mukicheni sofa iwe pachako. Haufanire kubhadhara nyanzvi inodhura kuitira kuti iwe ugone kuchengetedza mari zhinji pano zvakare. Iyo kicheni sofa faucet yeWOWOW inouya neye dhiza dhiramu, giravhiti yemagetsi, seti yemoto inopisa uye inotonhora hoses yemvura uye seti yezvinhu zvinokwidza. Iyi seti yakazara inovimbisa yekuisa nekukurumidza uye nekukurumidza. Zvakareruka saizvozvo!
Zvakanakira dhiri rekucheka kicheni sofa faizets muchidimbu:
● Inopa wow-factor kune chero kicheni
● nickel yakashongedzwa zvine mutsindo
● Yakakwira-mhando kudhonza pasi pombi yemvura
● Mabasa maviri emvura
● Yakagadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu zvendarira
● Zviri nyore kuchenesa uye zviri nyore kuchengeta
● 5-gore garandi
SKU: 2310301 Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Pasi Makapu Makapu Tags: Bronze Nickel, Dhonzera pasi, Mumwe Hole
1or 3 Hole Deck Gomo
Kicheni / Imba / Yekutengesa / Yekudyira / Imba / 1or2 sinks
Kicheni inodzika pombi; 50cm Kupisa & Kutonhora Mvura Hosi; Dhonza pasi sprayer; Deck ndiro; Kuisa zvishongedzo
Isu takatsiva yekare moen kicheni pombi neiyi uye ini ndaisakwanisa kufara! Murume wangu akaororwa paakavhura bhokisi. Akawana pombi yakarongedzwa mufuro uye isina kuvhiringidzwa panguva yekutakura. Chinhu chinotevera chaakafadzwa nacho yaive rairo yekuisa iyo yaive yakajeka uye yakapfupika. Dambudziko ripi neripi rinogona kuve kero neyakagadzirwa chigadzirwa ichi. Kubva munzira kuenda pasi kune maadapter uye mawasher ayo aisanganisira. Kuiswa kwaive nyore uye pombi yakaenda kekutanga.
Pane joke riri kumhanya pakati pedu kuti chero chirongwa chatinotora pane chinofanira kutora awa kana maviri; zvinotitorera mazuva maviri. Kwete iyi isu taive nematambudziko akawanda kubvisa pombi yakare tichienzanisa neiyo shoma uye 2/1 awa yekuisa mune ino!
Yakanaka kwazvo pombi, kunyanya kana vakawanda vakaifarira vanoenda kune imwe mari yakawanda. Isu takanamatira nepombi yakasanganiswa yepurasitiki / yealuminium patakatamira mumusha wedu mutsva. Yakabuda kubva pombi uye taitambisa mvura. Uku kwaive kusimudzira kukuru kwerwiyo. Isu takatsiva zvakare vharuvhu Hardware sezvo izvo zvakaburitswa uye zvichingodaro. Kana iwe urikubvisa chirongwa ichi, ini ndingati tora izvi kutanga uye Push pachako kuti zviitwe. Iwe haunganyadziswe.
Ini handidi mapombi ekugadzira mapombi. Nehurombo, ini ndaifanirwa kuisa mamwe mapombi (Moen, Delta, Pfister) kupfuura zvandine hanya nekurangarira. Iyi WOWOW ndiyo iri nyore pane yandakamboita. Panzvimbo pekumisikidza iyo kunyura kuburikidza neakadzika huro socket iyo mamwe mabhureki anopa, izvi zvinoshandisa seti sikuru iyo iri nyore kwazvo kana yako yakaputirwa mune isina maturo cabinet ine mashoma mwenje uye nzvimbo. Mitsetse inotonhora uye inotonhorera yainyatso nyorwa nekodhi yekodhi, pamwe nemazwi anopisa uye anotonhora. Sebhonasi yekuwedzera, yakauya ne 3/8 ″ kusvika 1/2 ″ adapter iyo yandaida kubatana nevhavha ye shutoff. Izvi zvakandiponesa rwendo kuenda kuchitoro chehardware. Ndiyo yakanakisa pombi yekumisikidza.
Ini pombi yakatengwa kwechinguva uye ndakafunga kuti ndaizopa iyi kuyedza sezvo yaive yakawanda mari kupfuura vamwe vandakanga ndaona. Ehe, ndaive nekakutya nekuti raive risiri zita hombe uye isu takatogadzirirwa kuenda nemazita makuru. Inoshanda chaizvo uye kunyangwe ini ndaigona kuiisa uye iri kutaura zvakawanda (zvakanyanyisa!). Mirayiridzo yanga isinganyatso kujeka kwandiri asi iyi yaive yekutanga kuedza kwangu pane chero chinhu chakadai (tenda kunaka kwegoogle uye youtube)! Ini ndaifanirwa kutenga macomputer ekuwedzeredza emvura kuti ndisvike pakupa mvura sezvo bhegi rangu rekare rakanga riine tambo dzakaomarara dzemhangura dzichidzika kubva pairi uye iyi ine tambo dzemagetsi dzakabatanidzwa kare. Iwo ekuwedzeredzwa aive pasi pe $ 10 pane hombe bhokisi hodhi hodhi. Ndakaifarira iyi nekuti zvakare inosangana zvirinani neyangu yakajairika kicheni singi sezvo isiri yakanyanya kupenya asi ichiri kutaridzika kutsva uye yakachena. Iwo musanganiswa wakanaka weukwidziridzo pasina kunyanyisa fancy. Ndiri kukwanisa kusvika muhari hombe zviri nyore uye zvakadaro, pombi haina kukura zvekuti inotaridzika kunge isiri mukicheni yangu diki. Swivels mushe / mushe, great spray / stream, nyore kuchinja pakati. Yakakura, kukosha kukuru. Ini ndinokurudzira zvikuru. (Ini handina kudzoserwa munzira ipi neipi pakuongorora uku uye handina hukama nekambani. Ndinogara ndichingofungira wongororo dzakabhadharwa.
Pamari haugone kurova pombi iyi! Iyo ine maficha ayo anodhura mapombi ane. Maitiro ese ari nyore kuisa. Ndinoda rin'i uye sikuruwa chekubatanidza kuti ubatanidze pombi yekunyura dhizaini. Iwo maipi ese akanyorwa uye anoita kunge anorema basa. Paunenge iwe wabatanidza huremu pfapfaidzo inodhonza kunze nyore kwazvo uye inodzokera kumashure sezvazvinofanirwa kuita. Iko chete kunoshanda kudzorera kwandinoona iri bhatani pane pfapfaidzo. Iyo ine yekuchinja mhando bhatani iyo inoshanduka pakati penguva dzose rwizi, pfapfaidzo uye musanganiswa wekupfapfaidza uye rwizi. Iyi switch ndeye floppy uye inozoda kuchinjira kuhafu pfapfaidzo uye nerukova modhi nekungobata sprayer. Nguva ichataura kuti bhatani iri rinomira sei. Ndinokurudzira iyi pombi!
Ndakatenga pombi iyi yemwanakomana wangu nemuroora wechipo chekudziya mumba. Vakanga vane bhegi rekare rechrome risina chipfapfaidzo (uye ivo havana dhishi rekuwachirawo). Ini pakutanga ndakaraira iyo yendarira modhi b / c ini ndaifunga kuti yaizoenderana neyavakange vatove nayo. Vakafunga kuti vaida mutema pachinzvimbo, saka ndakadzorera bronze kuchitoro cheko cheKohl (zviri nyore kwazvo!) Ndobva ndaraira iyo nhema. Rega ndikutaurire - iri tepi ibhomba! Iko kumanikidza kwemvura kunoshamisa uye chipfapfaidzo chinoshanda zvirinani pane chero imwe yandakamboshandisa, uye ini handisi kana kutaura nezvekunaka kwazvinoita. Ndakanga ndichitya zvishoma kuraira zita rechiratidzo randisati ndambonzwa nezvaro, asi ndinokurudzira ichi chiratidzo kune chero munhu ari kutsvaga pombi yakasimba asi isingadhuri. Basa Guru WOWOW !!!
Tine imba yePark Model mune imwe nzvimbo yekutandarira muFlorida ine dhifa diki mbiri. Pombi yakaderera yataive nayo yaigara iri dambudziko kana tichida kusuka chero chinhu chakakura. Bhegi iri rinoshanda zvakakwana.
Ini nhatu ndakaisa nyeredzi kumisikidza nekuti hwaro hwepombi hwaive hwakakura zvishoma pane iro gomba musingi redu risina chinhu. Ini ndaifanirwa kuriseta kuti ndikurise gomba. Handina chokwadi kana gomba musinki redu raive diki pane zvakajairwa kana kuti hwaro hwepombi hwainge hwakakura zvakajairika. Pane imwe nguva ndakaiisa yakaiswa mukadzi wangu anoida. Ndicho chinhu chakakosha !!! Rudyi??
Ndinoda pombi yangu nyowani! Ndakaitisana nharo kana kutenga imwe nemutengo wakapetwa kubva kuDepoti yangu yemuno ingangove nzira "yakachengeteka" yekuenda, asi ndakawana izvi kweinenge mwedzi zvino uye ndinozvida. Iyo yemhando yepamusoro uye inotaridzika senge yangu yapfuura (inodhura, namebrand) pombi.
Ndakatenga imba nyowani yr yapfuura uye muvaki akaisa yakadzika magumo anotarisa mapombi. Ndiri kufara zvikuru nenzira iyo pombi iyi inotaridzika uye inoita. Ndingati chichemo changu chidiki chete ndechekuti mvura inobuda zvine simba, asi ndiri kujairira kubata bata kana kuibatidza. Zviri nyore kuchinja kubva kurukova kuenda kupfira, ini handina kushandisa bhatani rekumbomira zvakanyanya asi richishanda. Ini ndaive ndakaisirwa nemunhu anobatsira uye iye haana kana dambudziko kuiisa. Iko kukosha kwakakura uchienzaniswa neImba Depot kana yaLowe sezvo pasina chinhu mune iri mutengo renji.
Ndiri kupa 5 nyeredzi kusvika ikozvino. Isu tangova nayo inenge vhiki kana kupfuura uye tinochida kusvika ikozvino. Zvaive nyore kwazvo kumisikidza uye iyo matte nhema kupedzisa inoenda zvakanyanya nematafura edu egranite. Munguva pfupi yatakange tave nayo yatove kunze kukaita pombi yedu yekupedzisira yatakatenga isingasviki gore rapfuura. Mutengesi aisazoita zvakanaka pachigadzirwa chavo. Ndanga ndichitsvaga kwekanguva uye iyi yaitaridzika kunge yakanakisa pamutengo uye inoita kunge ine yakanaka yekutendeseka ongororo. Sezvo ini ndakati ayo anga achingova mavhiki mashoma zvakanyanya asi achagadzirisa gare gare uye ndinovimba iwo mushumo wakanaka!
Pombi ino inofanirwa kuve chakavanzika chikuru kwazvo pasirese. Iyo inokwira zvakanaka, inotaridzika zvakanaka, inoshanda mushe uye inotemerwa mushe. Isu takatsiva iyo yepurasitiki junk muRV yedu uye mukadzi anoida. Izvi zvichashanda zvakanyanya mumba futi.
Pombi iyi yakanaka !! Ini ndiri mukadzi ane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa uyo aifanirwa kuchinja bhegi rangu repombi nekuti rangu rekutanga rakatyoka. Ini handina ruzivo rwekuchinja pombi kana chero mhando dzemapaipi, asi izvi zvaive nyore kwazvo kuisa. Ndakaona 22 yemineti vhidhiyo paYouTube maitiro ekuisa iyi tepi uye ikazoitwa mukati memaminitsi mashoma makumi maviri. Iyo inouya nemirairo, asi ini ndaona vhidhiyo yacho kuti ive nyore kunzwisisa nekutevera. Ikozvino zvayakaiswa, yakasimba kwazvo isina kuvuza uye kumanikidza kwemvura kuri prefect. Zvakanyanya kukurudzira iyi pombi!
Ndiri kunyatsofara nepombi iyi. Waive mutengo wakanaka zvekuti ndaifanira kuuedza. Iyo yemvura sprayer inodzosera mushe iwe unongofanira kuibaya panzvimbo. Asi ini ndinoda kuti iwe unogona kuzvishandura kubva kuzere spray kusvika kushower spray uye kana iwe uchinge uchisimudza iwe une sarudzo yekuona chokwadi kuti mubato wako une clearance yekusarova yako hwindo sill kana backsplash. Isu takakwanisa kutenderedza base saka kana ini ndiri kushandisa mubato haife yakarova yangu hwindo sill. Zvichienderana uye nyore!
Wow! Izvi zvaive nani / zviri nyore kuisa kupfuura zvandaifunga. Inoshanda zvakanakisa, iyo yekumisikidza maitiro yaive inenge 1/2 awa. Kana iwe usingatyi kunyorova pamwe zvakasviba pasi pesinki, vakadzi munogona kuzviita. Sevha yako mari kubva pakubhadhara nyanzvi. Isa pasi mamwe magumbeze ekare tora nguva yako pamwe nemirairidzo yaungangoda mafuta ekupfapfaidza kuti usunungure kumwe kubata kwakasimba. Nekudaro, mhando yeiyi pombi yakakosha nguva yako nemari. Ndiri kufara nesarudzo yangu.
Chikamu chakaomesesa chese chiitiko ichi chaive chekubvisa pombi yekare yekicheni. Paive nenzungu diki kwazvo iyo yaibviswa. Ini ndaifanira kushandisa bheseni wrench kuti ibvise. Ini ndinotenda ndiani akambomisa iyo faucet akashandisa isiriyo chishandiso kusimbisa iro bhaudhi. Nepombi iyi ndakangokena mushamba muhombe kunge nzungu neruoko rwakasimba sezvandinogona, ndobva ndaipfekedza nekukora screws nhatu ine screw driver. Pane mirairo yekuenzanisira zvirinani kuti ungazviita sei.
Saka semunhu aiita zvekutengesa ndaive ndisina chokwadi chaizvo mukadzi wangu paakatora pombi iyi kuti iiswe mukicheni medu nekuti imwe yandisati ndambonzwa nezvechiratidzo uye mbiri yaive pasi pemadhora makumi manomwe nemashanu izvo zvinowanzoreva kuti uri kuzvitsiva mumavhiki maviri. Asi izvi zvaive zvakasiyana uyu pombi yakanyatsogadzirwa yakasimba uye iri pachokwadi zvirinani kupfuura chero pombi yandakave nayo kana kuisa mumakore gumi nemashanu andanga ndiri mukutengesa pombi dzemvura vachatenga chigadzirwa ichi zvakare kuyedza mimwe mipombi yavo kunze
Ndinoda pombi iyi. Iyo yakanaka uye inoshanda kwazvo. Izvo zvakanaka pakuita madhishi nekubika asiwo nekupa zvirimwa zvangu bhati nyoro uye kudiridza. Ndiri kufara kwazvo nepombi iyi. Mutengesi aive akanaka uye chinhu chakasvika nenguva uye nemamiriro akakura. Ini zvechokwadi ndaizotenga kubva kumutengesi uyu zvakare.
Parizvino zvaitwa chaizvo zvandaitarisira kuti akafirwa kuti aite. Hapana kudonha, uye hapana kukuvara mushure mekuzviputira nehari netsaona asi ini ndangova nayo kwemwedzi mishoma, saka izvi hazvisi zvekutambudza bvunzo.
Kuisa kwaive kwakanaka kudiki, mipombi inogara iri mhando yekushungurudza kuisa sezvo kuwana kwaive kushoma, asi uchienzaniswa neyekare dhizaini nejanky fittings inoda wrench yakakura mune diki nzvimbo, iyi yaive toni nyore. Ini ndakakwanisa kuisa izvi ndisina rwechipiri maoko.
Ini ndaive neiyi faucet yakaiswa nehandimanim saka handigone kutaura pamusoro pekureruka kwekumisikidzwa asi ndinogona kutaura kuti yakanaka uye inoshanda nemazvo. Zviri nyore kuchinja pakati pekupfapfaidza uye rwizi. Bhatani rekumbomira rinoshanda nemazvo, sezvinoita dhonza pasi chimiro. Ini ndaive nepasi, yakatwasuka pombi pamberi uye ichi chiroto chakaitika kwandiri. Chimwe chinhu chandinoda iwe kuzadza marefu midziyo nyore. Inotaridzika yechinyakare uye yemazuva ano uye ine kupera kwakanaka. Ndingakurudzira zvikuru pombi iyi.
Ndichangopedza kuisa izvi uye zvinoshamisa. Ino inguva yangu yekutanga kutsiva pombi ndiri ndega uye zvakanditorera nguva kuti ndibudise yekare zvekare zvayakaita kuisa iyo nyowani. Pane imwe nguva ndakaburitsa yekare, zvakanditorera pasi pemaminitsi masere kuti ndiise iyi nyowani uye nemvura inomhanya nayo. Ine huru yekumisa chimiro mumusoro saka haufanire kusvika kudzima mvura kana uchida kudhonza musoro kuti uyambuke pakaunda kana chimwe chinhu.
Chikwata ichi ndicho chandiri kutsvaga kutsiva pombi yangu yekare yekicheni. Icho chakakura kukosha chigadzirwa kana ichienzaniswa nemamwe mabhureki rega zvoga mazita ane mazita. Kutaridzika kwakanaka, kwakavakwa zvakanaka uye kuiswa kuri nyore kwazvo. Ndinoshuva kuti dai vaine isingabatike pfapfaidzo musoro sarudzo. Ndakatenga imwe kutsiva sprayer uye ndaida. Super nyore. Ini ndinofungidzira mhando iyi dhizaini yakakura kwazvo uye kunyangwe kana isiri zita rechiratidzo, rinofanira kushanda nemazvo. Ndinokurudzira.
Ndinochida! Inoita kunge yakakura uye yakagadzirwa zvakanaka. Iko kusimudzira kukuru kubva pane zvandaive nazvo kare. Ini ndinonyatsoda mashandiro ayo ari nyore kuenda mberi uye mberi uye kuti sprayer inodzokera sei munzvimbo yayo otomatiki. Kutenga kukuru kana uchienzaniswa nemabhokisi ezvitoro anotengesa izvi kwemazana emadhora kana kudarika. Nekuti yaive mari yakaderera kudaro ndakakwanisa kutenga murume wekubatirira kuiisa. Zvikasadaro ndingadai ndiri pasi pesink kwemaawa! Lol.
Pombi yemumba mamai yakatanga kubuda uye vaisada kuita zvekuchinja washer nezvose izvozvo. Une iyi uye yakatsiviwa mumaminitsi makumi matatu. Yakatora maminetsi makumi maviri kuti ibudise yekare, yike. Parizvino, yave nemwedzi mitatu uye ichiri kushanda zvakanaka. Ini ndakaisa isina ndiro pane rimwe gomba uye inotaridzika zvikuru IMO. Chinhu chega ndechekuti ine nyowani 30/20 ″ yemvura yekubatanidza uye yakawanda yemavharuvhu ekare ari 3/8 ″ saka tarisa izvo. Zvikasadaro, mutengo mukuru uye chikuru chigadzirwa.
Pombi iyi yakanaka. Takazvitengera imba yedu yekuwachira mbichana, kutsiva pombi iyo yaidhura katatu zvakapetwa asi zvakangotora makore mashoma. Yakanga iri nyore kwazvo kuisa uye yakatarisika uye ichishanda, mudzimai wangu akakurudzira kuti tiise mukicheni yedu yekushambira. Kana yedu nyowani yekicheni inonyura pombi inopera isu tinotsiva neimwe yeiyi, kwete iyo $ 3. imwe (chimwe chiratidzo) icho chiripo parizvino. Isu tinochida, iyo WOWOW Faucet.
Takatenga pombi iyi sechinotsiva mubato wakavuza 2 wataive tichishanda nawo. Uyu akanaka! Inotaridzika kunge iwo ekumusoro ekupedzisira iwe aunogona kutenga kuchitoro chehardware asi nechikamu chidiki chemutengo. Murume wangu akariisa. Isu tanga tine nyaya diki pakuisa, asi ini ndinofunga yaive yega yekunyura nyaya iyo yakagadziriswa nyore nyore murume wangu paakaveura imwe huni yaive munzira nekuchengetedza pombi kuti isanyatso sungwa. Yakakwana kugutsikana nekutenga.
Pombi iyi yaive mhepo yekuisa. Inoshanda zvikuru, uye ini ndinoda chimiro. Iyo nhema nhema yekushongedza uye inopesana nemaprinti - ayo andinokoshesa sezvo ndainetseka kuti icharatidza zvese zvidiki chinhu. Chinhu chega chandinoshuvira kuti pombi iyi yaive nemagineti kana chimwe chinhu chakafanana kubatsira kuburitsa pombi yacho panzvimbo yayo kana wapedza mushure mekushandisa pombi yekupfapfaidza. Iyo inokodzera kudzoka munzvimbo yakanaka chete asi iwe unofanirwa kuve werudzi rwekuishandisa iko kudzoka nemaoko. Iyo tepi yakanyatsogadzirisa kumashure nekudzoka kubva kurukova kutimwaya kwatiri kusvika ikozvino. Haina kunge iine chero nyaya dzinodonha sevamwe vakataurwa nezvadzo mumaongororo (akaiswa mwedzi wapfuura). Tine kumanikidza kuri nani kuburikidza nepombi iyi kupfuura yedu yekupedzisira futi. Isu hatina kushandisa "kumbomira" chimiro - zvinoita kunge zvisina basa kana uchingogona kudzima mvura zviri nyore, asi pamwe vamwe vanoona izvi zvichibatsira. Zvese mune zvese, kutenga kukuru.
Chigadzirwa chakasvika nekukurumidza. Ini ndaive ndakaisirwa neRoto-Rooter nekuti imba yangu ine makore makumi maviri nematatu uye ndaida chero pombi dzemvura dzinobatwa nenyanzvi. Zvinotaridza kuti pombi ine pombi chaiyo. Akanga achindiudza kuti akagutsikana sei nazvo. Mumazuva mashoma atanga tichishandisa ini ndinobvumirana naye zvizere. Isu takagutsikana zvakare. Ini ndinokurudzira chinhu ichi kana iwe uchitsvaga kusimudzira kwakakura nezvakanaka maficha.
Zvide! Pombi yekare yainge yatora makore OMG, yakazotadza! Ndakatarisa maitiro aya ndikaziva kuti ndaida.
Ini ndakatora iyi uye ini ndakafara 100%. Inoshanda zvirinyore, iyo yekufapisa basa ine simba uye zvakajairika basa rakakwana. Chikamu chakaipisisa chezvese change chiri chekare kubva kunze, nzungu hombe dzakaonda dzakashata zvakanyanya, uye dziri munzvimbo isingagoneke!
Bhegi rakanaka chaizvo. Hunhu hwakanaka. Ini ndaizotarisira kubhadhara yakawanda kwazvo mune imwe yemahombe makuru ekuvandudza dzimba. Ndiri kufara kwazvo nekutenga uku. Iko chete kushoropodza kwandinako ndeyekuti iwe unofanirwa kuve nemaoko kuve nechokwadi chekuti musoro wakamira zvakanaka kana uchinge waadhonza pasi. Izvo hazvingoerekana zvapinda munzvimbo yayo chaiyo pasina kugadzirisa zvishoma. Ndiko kunetseka kudiki.
Iko kumanikidza kwemvura kwakanaka. Iyo ine yakanaka pfapfaidzo sarudzo uye pause sarudzo.
Yakaitwa yakasimba. Zviri nyore chaizvo kuisa. Isu takave nevamwe vakati wandei vasina kuisa kana kubvisa zviri nyore kwazvo uye panorwadza kwazvo kushanda nawo. Iyi ndiyo yanga iri nyore. Kushamiswa nekunaka uye kusimba kwazvakaita. Bhatani rekuchinja pakati pemabasa akasiyana emvura rakasununguka. Ndinoda kuti ive yakatwasuka kuti irege kutsvedza pakati pemabasa maviri emvura zviri nyore. Asi zvakazara, Zvakanaka.
Ini ndaive ndichida kwazvo pombi nyowani sezvo yangu yegumi nembiri yekubheka pombi yakafunga kuti yaive nguva yekudonha asi zvakatoipa yaive ichidonha pasi pesink zvakare. Ndakadana murume anobatsira uye yake inotevera yakavhurwa musangano yaive mumazuva mana. Ini handisi nyanzvi yemapombi saka ndakaenda paWOWOW ndikaraira iyi faucet nekuti yaive neongororo huru uye zvinoshamisa kuti yaisadhura. WOWOW yakaziva kuti yaizosvika pamba pangu mumazuva maviri uye yakaita. Ndiri kufara kwazvo nekutenga uku.
Bhegi iri rakatsiva bheu rekare rekubata dhonzaiti. Wakatosungwa kutsiva iyo yekumwaya mapurasitiki uye hoses pavanotanga kubuda. Iyi nyowani nyowani brashi inodhonza pasi inotaridzika yazvino uye yakanaka pane yedu isina simbi kicheni singi! Yakanga yakagadzirira kuisa. Muchokwadi nehungwaru hwangu, vana vangu vane makore maviri, gumi nemashanu vakatsiva pombi ivo pachavo. Handikwanisi kukambaira pasi pekunhuwa sezvandaimboita LOL Chikamu chakaomesesa kuburitsa pombi yekare ...
Parizvino, ndinofara kwazvo nekutenga uku uye ndinogona kukurudzira!
Ndakaisa pombi iyi mukicheni mangu! Mudzimai wangu akazviona uye akazvifarira. Tiri kuenda kumba kwekurima uye tarisa uye izvi ndizvo chaizvo zvataida nyore kuisa hautombodi rairo. Ini handisi murume anobatsira asi ndakazvifunga !!! Yakanditora maminetsi makumi matatu kuti ndibudise imwe yekare uye nekuisa iyo nyowani !!! Ndingatenga imwe kana ini ndaida iyo !!! Kutumira nekukurumidza zvakare
Ini ndaifanira kutsiva yangu Moen kicheni pombi. Akanga asati ambotenga pombi kare uye akashamisika nemutengo! Tsvaga iyo WOWOW uye mutengo wanga wakanaka saka ndakaipa pfuti. Inotaridza kushamisa, shanda zvakakwana uye ini ndinotofunga kuti kumanikidzwa kwemvura kuri nani. Shamwari yandaive nayo yaisave nematambudziko zvachose.
Inonakidza pombi yekugadzika uye yakapusa kuisa kune kuzviita iwe wega. Ini ndaifanirwa kucheka bhegi rangu rekubatanidza rekare nechombo chinotenderera sezvo kubatana kwacho kwainge kwaora. Gungano idzva rakaenda naro zviri nyore sezvo kubatana kwakapihwa kwaive kwakanyatsogadzirwa uye kwaifungwa. Ini ndinokurudzira zvikuru chinhu ichi kune chero munhu anofarira kutsiva pombi yavo yekicheni.
Iyi ipombi yakanaka inoenderana zvakakwana mukicheni mangu. Ndakaitenga seinotsiva faucet yemakore gumi nematatu yeMoen. Kuisirwa kwacho kwaitaridzika kuve nyore, asi ini ndaifanirwa kuti pombi yangu imire nekuiisa nekuda kwekusakwanisa uye kuoma kwekubvisa pombi yekare. Iye akati akafadzwa uye akaisa vamwe veichi chigadzirwa zvakare. Haugone kutaura mukugara sezvo ini ndanga ndangoisa iyo, asi iko iko iko kugadzirisa.
Yakakwira Hunhu, ese mativi akanyatso mucherechedzwa ekubatanidza uye nyore musangano. Iyo yekuwedzera bhaudhi - yakashandiswa pazasi pesingi (kuchengetedza pombi pasink) yakagadziridzwa zvakanyanya pamusoro peyakajairwa mabhaudhi - nyore kuisa neruoko uye sikuruira mutyairi. Iyi ndiyo pombi yekutanga yekicheni yandaisa; saka, kana ndichigona kuisa izvi, chero munhu anogona
Isu takave neiyi faucet yakaiswa kwemavhiki mashoma ikozvino uye kusvika zvino yakashanda zvakakwana. isu takanga tisina kana kuburitsa kana kuravira kwakashata Kana kusvibisa senge mamwe ehurombo wongororo. Murume wangu akariisa mukati memaminitsi makumi matatu. Inotaridzika uye inonzwa zvemhando yepamusoro uye yaive mutengo wakakura uchienzaniswa nevamwe. Ndiri kufara kwazvo kuti ndakatenga izvi! Ungakurudzira!
Iyo ipombi huru yemutengo. Ini ndashandisa mamwe mapombi anodhura zvakanyanya munguva yakapfuura, asi iyi inoshanda zvakaenzana!! Inosangana nezvandinoda zvachose. Kumanikidzwa kwemvura mukicheni mangu kuri nani sezvo isu tatsiva pombi yakare. Ini ndinokurudzira zvikuru iyi inodhura inoshanda kunze kwekunge iwe uchitsvaga modhi yedeluxe iyo ichave katatu kana ka3 mutengo wacho.
Ini ndaive nenyaya yekuisa asi imo nekuti sink yangu yakaitwa zvisirizvo. Mushure mekunge ndawana dambudziko rakagadziriswa zvaive nyore! Bhegi rangu nyowani rakanaka uye rakanaka! Ndiri kufara kwazvo kuva nepombi refu uye handichadi kushandisa makapu kuzadza mapani angu marefu nemvura. Iyo yekudhonza kunze ficha zvakare yakanaka!
Bhegi iri chairo raive pamusoro pemadhora mazana maviri kudepoti yekumba uye menards! Ndatenda nekundichengetera mari yakawandisa !!
Izvi zvakatengwa seyakagadziridzwa kugadziridzwa kwangu kwekicheni, iyo yakatsiva 20+ yo pombi. sekukwirira saka unogona kuzadza hari hombe uye nekuchenesa. kuve nerukova uye kupopera basa zvese mune imwe nekubata bhatani chinhu chakakura, brashi isina simbi yekupedzisa yakanaka uye yakachena kutarisa. Kukosha kukuru kwemutengo.